Ihe oru 3 maka Utu Pi nke anyi nwere ike iji Lego pieces | Akụrụngwa n'efu
Ọrụ 3 maka Rasberi Pi na anyị nwere ike iji Lego iberibe
Ọtụtụ ọrụ ndị dịịrị iji were Rasberi Pi na-achọkarị onye nbipute 3D iji nwee nkwado ma ọ bụ akụkụ gbanwere pụrụ iche. Nke a bụ n'ihi na ọ na-arịwanye elu ịnweta oghere 3D eji ebipụta ngwa ndị a, mana ọ bụghị ihe zuru ụwa ọnụ.
3D na-ebi akwụkwọ ndị na-ewu ewu dị ka anyị ga-achọ na ọtụtụ ọrụ ma nwere ịtụ na akụkụ site na-ebi akwụkwọ ọrụ ma ọ bụ chọọ ndị ọzọ ọzọ. Na enweghị 3D obibi, Lego iberibe mgbe niile abụ ezigbo nnọchi. Anyị na-ekwu maka ya Ọrụ 3 anyị nwere ike iji Lego blocks rụọ, a ọtọ na yi nhọrọ.
1 Lọ ma ọ bụ ihe mkpuchi
3 Mgbidi-E robot na Lego iberibe
4 Akpaaka akpaaka na-atụgharị
Lọ ma ọ bụ ihe mkpuchi
Otu ihe ama ama ama ama ama amala ama nke Lego blocks na Raspberry Pi nwere bụ ụlọ maka ụlọ a. Ọ bụ ọrụ dị mfe na ngwa ngwa ịme, ọ ga-enyekwa anyị ohere ịchekwa euro 15, nke bụ ihe ikpe nkịtị ga-efu anyị. Na mgbakwunye, Lego blocks ga-enye anyị ohere iwu okwu maka ọrụ pụrụ iche dịka ụyọkọ nwere bọọdụ Raspberry Pi.
Ekwe omume nke na-eji acha iberibe na-eme ka o kwe anyị ka ike a shei na ọdịdị nke a ochie console, ma si otú a na-ekpuchi utu Pi na anya ochie ma ọ bụ jiri ọdịdị nke ihe njikwa na nha belata. Na mpempe ndị a, anyị ga-agbakwunye ntinye nke RetroPie, sistemụ arụmọrụ nke ga-agbanwe Raspberry Pi ka ọ bụrụ ihe egwuregwu egwuregwu ochie.
Mgbidi-E robot na Lego iberibe
Ọ bụrụ na ị bụ ndị Fans nke ihe nkiri Disney, n'ezie ị maara nke a mma robot. A robot na anyị nwere ike iwuli na Lego iberibe ma nwee utu Pi na-agba ọsọ ahụ ma rụọ ọrụ ụfọdụ. The mgbidi-E robot pụrụ ịchọta na weebụ a, n'ime ya ha na-akọwa otu esi ewu ya site na isi na iberibe ị ga-achọ iji wuo ya.
Akpaaka akpaaka na-atụgharị
Ee, amaara m na e nwere eReaders na mbadamba nkume nke nwere otu aka nke mkpịsị aka tụgharịa peeji ahụ, mana ọrụ a ka na-atọ ụtọ maka nke ahụ. Wheelgbọ ala Lego, Raspberry Pi na igwe eji arụ ọrụ nwere ike izu sapeta akwukwo. Nwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara ọrụ ahụ na nke a njikọ.
Mpempe Lego bụ ihe dị mkpa n'ọtụtụ ọrụ ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe anyị na-enweghị ike ịzụ ahịa, maka gburugburu ụlọ ọ ka dị mma ma ngwa ngwa karịa ngwa ndị ọzọ ebipụtara na 3D ebi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » Ọrụ 3 maka Rasberi Pi na anyị nwere ike iji Lego iberibe